NdakavaSVIRA vese Masisters vari 2 all night LONG – Vanoda Zvinhu
Ndakasangana naTariro paFlea Market KuMbare ndokubva ndamufarira, ndakakanda shoko ndokubva abvuma. Ndaiti kana apedza basa ndaimutora ndonomusiya kumba kwake, aigara neOlder Sister yake ainzi Nyasha. One day i was invited in after a night of partying paMachipisa kuGunners.
Tichipinda mukati zvakanzi pane we share a bed saka nhasi iwe ndiwe unorara pakati. Ndakaseka hangu ndokubvuma paye. Takapinda paBed ini ndokuenda pakati, Nyasha akanditi “u can’t sleep with your clothes Bamnini” Ndakasimuka ndichinyara ndokubvisa trouser neTshirt ndokupinda mubankets ndine boxer short chete.
Tariro akaenda munext inenge yaiva bathroom ndokudzoka akapfeka kanight dress keRed kairatidza mukati. Ndainyatsoona beche rake rakabumba mukati mako. Mboro yangu yakabva yamira ipapo ini ndokuhwanda mumablankets.
Sister yacho Nyasha anga asina kana nyadzi, ipapo pamberi pedu akabvisa hembe dzose nepanty ndokupinda mumablankets asina chinhu hake. Tariro akangoseka ndokusiya zvakadaro. Ndiri pakati kudaro BP yangu zvese neNyongo meter were very high above the roof. Nyasha aive nemazizamhu nemagaro ekuti nekutarisa chete waitunda!
Mublanket imomo Nyasha ndiye akatanga ndokundigumha achinditekenyedza. Ndakatanga kuseka ndichibuda mumagumbeze apa mboro yakamira ichibuda nepamabuttons eBoxer Short. Tariro akaseka ndokubvunza “Chamisa mboro iyo ndini here or ndiNyasha nemazigaro ake?” Vese vakaseka pandakapindura ndichiti MESE! Tariro akabva ati “saka uchagona here kusvira tese?” Ndakapererwa ndikaita 5 seconds dzekufunga ndokuti “ndinofa ndichiedza!”
Hapana kuzorarika musi uyu Nyasha naTari vakatanga kukisana ipapo…
Ndakavasvira vese ndichichinjanisa. Nyasha akaburitsa mbanje ndokuti Bamnini inwai tea ine mbanje iyi musatunde fast. Ndakanwa tea iya ivo vachikisana nekubatana batana.
Ndakaenda pabed paye ndokutanga kubata mazamhu aNyasha ndichamadya. Ndakachinja ndikaenda kunaTariro same treatment. Ndakapedza kudaro ndakarara ndakatarisa mudenga ndokuti, “anoda ngaayigarire mboro iyi” Nyasha akabva asimuka ndokuigarira, ndakaona mboro yangu ichidisappear kupinda mukati make mazigaro ake akaita zvekuimedza. Takasvirana takadaro ini ndichikisser Tariro iye achitambisa mazamhu aNyasha.
Takachinjana ndokusvira Nyasha same position. Takachinjana kusvika ndati ndakuda kutunda. Nyasha akati “Tundira mukati maNyasha uyu indiye asuwa mboro too much” Ndakandoita as instructed ndokuzadza Nyasha. Handizive kuti vasikana ava vakatunda kangani asi takanakirwa…
Kusvira Boss wangu kuGraft( another version)
Kusvira Mukadzi wemunhu paMidlands State Univeristy once again
· Last modified November 24, 2014 Next story Ndakaribhilivhisa ndokurisvira zvemhando Zibabe Musoja
Previous story Makwirirwo andakazoitwa na Sekai!